Moscow Red Square yakavharwa mushure mekudonha kwemadziro eKremlin
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Russia Kuputsa Nhau » Moscow Red Square yakavharwa mushure mekudonha kwemadziro eKremlin
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Moscow Red Square yakavharwa mushure mekudonha kwemadziro eKremlin.
Mhepo ine simba inovhuvhuta yakarova Moscow, ichikonzera bongozozo mumigwagwa uye ichitobvarura sikweya, ichikuvadza madziro eKremlin.
Mutungamiri weRussia Vladimir Putin vakambopomera mamiriro ekunze asina kujairika, semoto unopisa uye mafashama anoparadza, pamusoro pekudziya kwepasi.
Mune chirevo chakatumirwa padhorobha renhau reMoscow, vakuru vakuru vakayambira vagari kuti vatarise, vachiti mhepo inogona kusvika mamaira makumi maviri paawa.
Chimwe chezvikamu pamadziro eKremlin chakashaikwa zvachose mushure mekufema kwemhepo.
Mhepo ine simba, mvura nechimvuramabwe zvakaparadza guta guru reRussia reMoscow nhasi.
Mhepo ine simba ine mhepo yakakonzera kuuraya kwakawanda, kugogodza miti, kutumira magaba emarara mumugwagwa uye kunyange kukuvadza rusvingo rwe Moscow'inoratidzira nhare yeKremlin.
Moscow vakuru veguta vakatumira chirevo panhepfenyuro yenhau yemasipareta, vachinyevera vagari kuti vachenjere, nekuda kwemhepo dzinogona kusvika mamaira makumi maviri paawa.
"Ndokumbirawo mugare mumba kana zvichikwanisika panguva yemamiriro ekunze akashata," chirevo chepamutemo chakaverenga, "chenjera zvakanyanya mumugwagwa, dzivirira kugara pedyo nemiti uye usapake mota padhuze navo."
Ndima dzese ku Moscow'Mifananidzo yeRed Square yakavharwa kubva mumigwagwa iri padyo mushure mekuti scaffolding yakadhirika kubva ku Kremlin rusvingo kare nhasi.
Sekureva kweve emergency services, iyo scaffolding pane iyo Kremlin rusvingo rwakadonha, ndokukuvadza imwe yeshongwe yemadziro.
Pakutanga, iyo Russian Federal Inodzivirira Service Hofisi yeVanhu Vezvehupfumi yakazivisa kuti chiitiko ichi chakaitika nekuda kwemhepo ine simba, hapana kukuvara kwakataurwa.
Sekureva kwaPutin, kuwanda kwezviitiko zvakanyanyisa zvemamiriro ekunze kuri "kana zvisiri zvachose, saka kusvika pamwero mukuru, nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze munyika medu."